Any request for torrent downloading! - MYSTERY ZILLION
Any request for torrent downloading!
November 2010 edited March 2011 in Sharing
rapidshare hotfile အစရှိသည်တို့မှ ဆွဲမရသောဖိုင်များသည် torrent များတွင်ရှိနေတတ်ပါသည်။
torrent အား မြန်မာတွင် ဆွဲရန်အခက်အခဲရှိတတ်လေရာ လိုချင်သော torrent link များအား ဤနေရာတွင်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
၄င်းတို့အား ပြန်တင်ပေးစေလိုသည့်နေရာ၊ File size ဘယ်လောက် ပိုင်းရမည် စသည်တို့ဖြင့်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
torrent များမှာ အနည်းငယ်နှေးတတ်သဖြင့် အချိန်အနည်းငယ်တော့ စောင့်စေလိုပါသည်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ အကူအညီတောင်းတာပါ။ ဘယ်မှာမှ ရှာလို့မရလို့ .. ရရင်ကူညီပေးပါလား? အချိန်ဘယ်လောက်ပေးရ ရတယ်။ ရရင်ကျေနပ်ပီ။ :biggrin:
http://www.nldla.com/files/28_dhdqm/World of Warcraft Gold Generator Hack - WoW.zip
ကျေးဇူး .. ကိုစိန်ကုလားရေ .. :P
ဒေါင်းလို့ရသွားပြီ။ အပြင်မှာတွေ့ရင် ရေအေးအေးတိုက်မယ်.
အစ်ကိုရေ .. နောက်တစ်ခုလောက်ကူညီပါအုံး ..
အရင်တစ်ခေါက် အစ်ကိုပြန်တင်ပေးတဲ့ file က Password ခံထားတယ်..
ဒီတစ်ခေါက် နောက် Torrent တစ်ခုထပ်ပေးလိုက်အုံးမယ်.. အရင်ဟာနဲ့တော့ ဘာမှဆိုင်ဘူး .. ဟီးးး ... ကူညီနော်.. ကိုစိန်ကုလား!! အောင်မြင်ရင် ကျေးဇူးဆပ်မီ :P
'' http://thepiratebay.org/torrent/4877015/FL_Studio_Bible "
linnthitmyat wrote: »
ခဏလေးနဲ့ ပြန်ဖြေထားတာကို တွေ့ပါတယ်။
ကျေးဇူးပါ ၊ ကျွန်တော် mediafire ရော်၊ ifile ရော် down ပြီးသွားပါပြီး။
နှစ်ခုစလုံးမှာ PASSWORD ခံထားတယ်။
PASSWORD ပါ ကူညီပါအုံး
.rar password ကဖြေရတာခက်တယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။
အစ်ကို ရထားတဲ့ source site ကနေ ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ၊
try pw : kxbx
ရသွားပြီးဗျို့ ကျေးဇူး ကမ္ဘာပါဗျာ။
ကျွန်တော် copy တစ်ပုဒ်လုပ်မလို့
တီးတော့ တီးတတ်ပါတယ်... ဆိုတော့မဆိုဘူး... အသံမကောင်းလို့
ကျွန်တော်အရင်က အသုံးလိုတဲ့အချိန်မှာ software မရလို့ တော်တော် စိတ်ညစ်ခဲ့ဘူးတယ်
ဒါကြောင့် တောင်းတာတွေ့ရင် အတတ်နိုင်ဆုံးရအောင်တော့ ရှာကြည့်ပေးပါတယ်..
ပိုက်ပိုက်တောင်းတာတွေနဲ့ တွေ့ရင်တော့ sorry ပေါ့ down တော့ပေးချင်ပါတယ် မချမ်းသာဘူးဖြစ်နေလို့ :rolleyes::rolleyes:
အကိုရေ အဲဒါလေးဆွဲပြီး ifile မှာတင်ပေးပါလား
အကိုရေ ဒါလေးလုပ်ပေးပါအုန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား
အားလည်းနာတယ် အကိုရေ အဲဒါလေး ကူညီပါအုန်း
ဒီဖိုင်လေး ကူညီပါအုန်း ကို seinkalar ရေ
ဒီဖိုင်လေး ကူညီပါအုန်း ကိုseinkalar ရေ
Please help me this file<br>http://www.btscene.eu/details/599832/<br>thank you <br> <br>
ကိုစိန်ကုလား အစား တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ <br><br>	<a style="font-family: monospace; color: blue; font-size: 100%; font-weight: bold;" href="http://ifile.it/5epkls3/Antamedia HotSpot Billing Software crack.zip&quot;&gt;Antamedia HotSpot Billing Software crack.zip</a> <span class="fsize">1.124 MB</span><br><br>ကိုမောင်ဇင်။<br><br><br>
Hello, please try http://www.loadpot.net to download torrents! This isabeta release and use this coupon code 30dayspromo when you register it.
ဒီFile ေလးလိုခ်င္တယ္အကိုေရ h33t.com/download.php?id=91cfc101f2fa6da8d61816438ed4174e8592191d&f=Archon%20Systems%20inFlow%20Inventory%20v2.2.3.1%20Premium%20By%20Cool%20Release%20%5Bh33t%5D.torrent